Guska Jilicsan - iftineducation.com
aadan21 / July 31, 2017
Sida aan la socono raga waa kula duwanyihiin qiyaasta oo la egyahay malabyarowgooda raga qaar ayaa leh malabyarow aad u dheer kuwa kalena xooga mid yar dhirir ahaan iyo balac ahaanba.
Haddaba waxaa isweydiin mudan arintaan maxey door ah oo ay ku leedahay habsami u socodka galmada, sida ay sheegeen culumada ku taqasusay psychology arintaan wax door ah kuma laha xilliga galmadan sida ay qabaan dad fara badan oo badanaa isku mashquuliya arintaas.
cabirka guskaCilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ninka aqaan gaarka ah uu malabyarowgiisuu dhaxeeyo 12 centimeter ilaa 17 centimeter raguna 90% waxa ay u badanyihiin qiyaastan.
10%ragga ayuu ka yaryahay qiyaasta aan soo sheegnay lakiin waxa la xaqiijiyay in qiyaasta ugu fiican ay tahay 12centmitre .
Sida lagu sheegay cilmi baaristan waxa la ogaaday in naagta aysan wax dareenah galineynin dhirirka geedka kaliya waxa loo baahanyahay xooga inuu gali karo irida hore ee mahbalka naagta sababtuna waxa weeye raaxada waxa ay ku jirtaa inta hore ee malabyaraha ninka.
Culimada qaar ayaa qaba iney fiicantahay yaraanta bahalka sababtuna waxa weeye wuxuu badinayaa macaanta galmada markasta oo kasoo baxo mahbalka ama malabyarah naagta waxa a y dareemeysaa dareen saa,id ah inta ay socoto galmada, laakiin haduu isaga jiro dareenku ma sii badanayo.
Haddaba ugu danbeyntii hadii malabyaraha ninka uu gaari karo fooda hore ee habalka haweeneyda waa fiicanyahay kaliyab waxa laga rabo waa inuu meeshaas gaari karo ileen dareenku waxa uu ku jiraa fooda hore ee malabyaraha ninka.
Wasmo Siilka Iyo Guska
galmada istaaga oo haweenka dabada ka dhididaan? aqriso